Indlela yokufaka isiseko sokwenza
Phantse kwiminyaka eyishumi eyadlulayo kwakukho into enjalo njengesiseko sokwenza. Namhlanje, isiqingatha esihle sabantu asikwazi ukwenza ngaphandle kwesiseko sokwenza isiseko, esilungiselelo sobume bemibala. Kubaluleke kakhulu ukubeka isiseko phantsi kwezonyango eziphakanyisiweyo - sisisigxina sempilo nobuhle, kwaye ikwaqwalaselwa kwakhona njengesigaba sokuqala sokwenza ngokufanelekileyo. Ukusetyenziswa kwesiseko kuyimfuneko xa kuyimfuneko ukuba idibanise iziphene ezithile ezithe zixhobo ezilula ezingakwazi ukuhlangabezana nazo.
Ngokwe siseko, iziqhamo zezilumbiso zikhanya kwaye zilula ukuthungca, kuba isiseko sokwenza isakhono sokulinganisela isikhumba, kunye nokulungisa umbala wayo.
Isiseko sokwenzelwa kufuneka sifakwe kwi-cream day.
Ukukhethwa kwesiseko esilungileyo sokwenza
Isiseko esikhethwe ngokuchanekileyo sokwenza uphando, njengogqirha we-plastiki, uyakwazi ukuguqula umqolo wesantya, ubonakala ngokugqithiseleyo, okanye ngokulandelelana, ujikeleze.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abaqeqeshi beli funda basebenzise iziseko ezizodwa eziyimfuneko zokwenza uqeqesho. Abasebenzisi abaqhelekileyo banokuthenga iziseko ezifanayo kwiivenkile ezizodwa. Amagqabantshintshi ziintlobo ezahlukeneyo zokulungisa, abanemibala ehlukeneyo yombala. Zingasetyenziswa ngokuzimela.
Ungalondolozi nakwiindawo zokucoca, i-moisturizers kunye ne-tonics ebusweni obuxhasa ulusu kwindawo ephilileyo. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba isiseko sokwenziwa kwesikhokelo sinceda kuphela ngexesha lokulondoloza ukusetyenziswa kwendlela ngendlela efanelekileyo. Ulusu phantsi kwesiseko sesiseko kufuneka luhlanjululwe kwaye luhlanjululwe kakuhle. Kwakhona kubalulekile ukukhumbula ukuba nayiphi na indlela yokunyamekela ukunakekelwa kwesikhumba kufuneka ihambelane nomhlobo wayo kunye nendawo yobudala.
Abameleli bee-oily skin type, ngokungathandabuzekiyo, kufuneka basebenzise isakhelo sesiseko. Ukusebenzisa i-krimu yosuku kusasa, kufuneka ulinde imizuzu embalwa, uze ubeke isiseko ngaphantsi kwe-makeup. Kwaye xa kwenzeka ukuba akukho ziingxaki ezikhethekileyo ze-skozhej, isiseko sokwenza isicelo singathatha indawo yekhrimu yezwi.
Kwixesha elibandayo, ngokukodwa ebusika, isiseko se-makeup kufuneka sibe ne-thickness and greasy texture.
Kubaluleke kakhulu ukuthobela ingqalelo ukuba isiseko kufuneka sibe nomthunzi wesimo somntu wendalo. Ngaloo ndlela, umbala kufuneka ukhethwa emini, usebenzisa amathoni ahlukeneyo kwindawo yokuguquka kwentamo okanye ubuso. Isiseko sokwenza iifayile kufuneka sibe nefuthe lesikhumba, akukho mhlophe kwaye akukho mnyama.
Kucetyiswa kakhulu ukuba ulungele umbala wesikhumba. Umthunzi ophuzi wesiseko uguqula ngokupheleleyo imicu engaphantsi kwamehlo, uboya obomvu buyakwazi ukuphelisa ubumhlophe bombuso, umbala obomvu uya kuphucula umbala ngokubanzi, isiseko somthunzi oluhlaza singabonakala sisuse imithwalo yegazi kunye ne-capillaries.
Iisiseko zokuzenzela izakhiwo ezahlukeneyo
I-Emulsion kunye ne-fluid iyisiseko esicacileyo sokwakheka kwamanzi. Isiseko esinjalo sikulungele isikhumba esincinci esingenayo ingxaki kwaye sichaza ukungaphumeleli. Olu luhlu lufanelekile kuphela kwesikhumba esingenalo isikhumba, njengoko singakwazi ukusifihla impazamo yesikhumba, kuba umxholo wayo unemibala encinane. Isiseko se-liquid sinakho ukuphakamisa umbala wobuso, ukuphucula isikhumba kunye nokunika umphumo wokuhlawula. Xa ufuna isikhumba esomileyo, kufuneka usebenzise isiseko kunye nemiphumo yokulinganisa, apho kukho i-note evelvety, oku kuthetha "ukuthandeka".
Isiseko sokwenza, esinomfanekiso ococekileyo, uqulethe ngokwaneleyo i powder kunye neengulube. Ngenxa yoko, akakwazi nje ukunika ubuso ngesohloni, kodwa ukugubungela nayiphi na ukungapheleli kwesikhumba ebonakalayo, zonke iintlobo zeempuphu kunye neentlobo.
Kukho isiseko esifana ne-gel sokwenza, ejoliswe kwiintlobo ezinamafutha kunye nezikhumba. Oku kubangelwa kukuba ukhilimu ngokusebenzisa le siseko ayikwazi ukugubungela ii-pores, ngoko ulusu lukwazi ukuphefumula ngokukhululekile.
Isiseko sokwenziwa komzimba oqinileyo sinokukwazi ukugubungela amabala kunye namacwecwe, ulala phantsi ngelixa ugciniwe. Ngaloo ndlela, kunokugqitywa ukuba isiseko solu hlobo luphelele kubameli bekhanda elinenkinga. Njengomthetho, iintlobo ezinjalo ziphawulwe kwiipakethe nge "MATTE".
Isiseko sokubumba kunye nefuthe elimnyama liya kunika ulusu lubukeka lukhangelekile nolutsha. Apha i-effect effect idlala indima ephambili, kuba iqukethe iingubo zowama-pearl kunye ne-shimmering nature, ehlakaza ukukhanya kwinqanaba elincinane.
Isiseko sokwenzelwa kwamehlo sinobunqamle, okanye sikhutshwe ngendlela yepensile. Kufuneka isetyenziswe njengesiseko, phambi kokufaka izithunzi kwiinkophelo kwaye ngoncedo lwaloo ndlela unokuzifihla phantsi ngaphantsi kwimijikelezo phantsi kwamehlo.
Kukho nesiseko esisetyenziswe ngaphambi kokufaka umlomo. Esi siseko siya kunceda umlomo uhlale ixesha elide emlonyeni, kunye nemilomo iya kubonakala ibe mkhulu. Isiseko sokwenza imilomo sinomhlaba wokukhusela kwimisebe yelanga.
Kwi-eyelashes, kwakhona isiseko sesiseko sisetyenzisiweyo, esetyenzisiweyo kunye noqweqwe olungqongqo, kwaye imascara sele isetyenzisiwe.
Imigaqo yokusebenzisa iziseko zokuzakhela
Ekuqaleni, kuyimfuneko ukufaka uluhlu lwekrimu yosuku ebusweni obuhlambulukileyo, oluya kuluhlaza ulusu kwaye lulufeze. Emva koko, emva kwemizuzwana embalwa, emva kokuba ukhilimu ufumene, kuyimfuneko ukufaka ukunyakaza okulula phantsi kokwenza. Isiseko esifanayo sisetyenzisiwe ngebhashi okanye amateyibhile akhethekileyo, kwaye ungasebenzisa iminwe yakho. Kubaluleke kakhulu ukwenza isiseko kwimigca ekhethekileyo yokusilalisa, kuba ngenxa yesicelo esingalunganga, isikhumba sinokulula kunye nemibimbi eyongezelelweyo iya kuqala ukwenza.
Kwimeko apho isikhumba sombuso sinohlobo olutyebileyo, kuya kukwanela ukufaka isiseko kunye nomphumo wokutshatyalaliswa okanye umgubo ophezulu nje kwisiseko. Kwaye ngemini, ngenjongo yokulungisa ukwakheka, kuya kuba nokwaneleyo ukufikelela emanzini enqabileyo yesikhumba esine-gloss oil and powder powder of nature. Kukho neziseko ezinomxholo we-antiseptics kwaye zinefuthe lokunyanga. Ezi ntlobo zeziseko zifanelekile ulusu olunamafutha olushushu.
Ukuba ulusu luloluhlobo olomileyo kwaye lubonakale lukhangeleka, luyimfuneko ukuqhubeka ngale ndlela: ngaphambi kokufaka isiseko, sebenzisa i-cream fat, emva koko kuyimfuneko ukusebenzisa isicelo sokucoca ukhilimu olusondezayo, kwaye usebenzise kuphela isakhelo se-makeup.
Ndingayenza njani ithoni yesikhumba epheleleyo
Iintshaba ezikhohlakeleyo: ezintathu iimpazamo ezibulalayo kwi-day-making
Uluhlu lweeNgcaciso zeNtsha zeNtsha zonyaka
Ungaziphoqa ukuba wenze ukuzilolonga
Kutheni amadoda anjengezesondo ezibi?
Nciphisa i-bachelor kwaye umkhokele kumhlobo obalulekileyo
Indlela yokunciphisa ama-pores adibeneyo
Iintlobo zabantu malunga nokutya